नेपाल आज | गैरकानुनी पैसाले चलेको छ रवी लामिछानेको ‘सिधा कुरा’ !
शनिबार, २३ असोज २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
चर्चित सञ्चारकर्मी रवी लामिछानेले नयाँ टेलिभिजन च्यानल ‘ग्यालेक्सी फोरके’ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिले सञ्चालन गरेको टेलिभिजनमा लामिछाने म्यानेजिङ डाइरेक्टरको जिम्मेवारीमा छन्।
न्युज ट्वान्टी फोर टेलिभिजनमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘सिधा कुरा जनतासँग’ को नामलाई केही परिमार्जन गरी उनले ‘सिधा कुरा विथ रवी लामिछाने’ लगायतका केही कार्यक्रम पनि ग्यालेक्सी फोरकेमा सञ्चालन गर्छन।
उनले ‘सिधा कुरा विथ रवी लामिछाने’ कार्यक्रमको पहिलो एपिसोडमा आफनो वारेमा केही कुरा वताए। जुन भिडियो युट्युव च्यानलमा पनि राखिएको छ। उक्त एपिसोडमा उनले टेलिभिजनलाई स्वतन्त्र र स्वाभिमानी पत्रकारहरुको तिर्थस्थल वनाउने सपना रहेको भन्न भ्याए।
सोही एपिसोडमा उनले आफुमाथि लाग्ने गरेका आरोपलाई चिर्ने प्रयास पनि गरे। ‘कोही ताल न वेतालसँग वेसुरमा टिभी खोल्ने पैसा कहाँवाट आयो ? भनेर क्याउँ क्याउँ क्याउँ क्याउँ.... गरिराख्छन् । पैसा यसका सञ्चालकहरुवाट आयो। राज्यको निकायलाई कर तिरेका हुन्छन्, लेखा परिक्षण सवै वुझाएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि वुझाईराख्नु ?’ उनले भनेका छन्–‘मेरो कुरा गरेको हो भने ल सुन्नुहोस। मैले पैसा कमाएको छैन। मैले पैसा लगाएर पार्टनरसिप लिएको होईन। मैले काम गरेवापत थोरै शेयर र पैसा लिएँ। लिएको त्यही पैसा मेरो शेयर भयो। तलव, गाडि, चाहिने सुविधा मजाले मागेँ, आफुलाई पुग्ने तलव सुविधा छाती ठोकेर माग्नु पनि पर्छ। ताकी नोटको विटो वोकेर कुनै कुकर्मीले प्रलोभन दिने आँट नगरोस। यो जिवन वाँच्न पुग्ने पैसा मैले वर्षौदेखि काम गरेर मात्रै कमाएको छु। कसैको जुठो आजसम्म खाएको छैन, खाँदा पनि खान्न । त्यसै वेकारमा क्याउँ क्याउँ... नगर्नुहोस ।’
आफु विरुद्धको आरोप पुष्टि गर्ने कोही भए जुनसुकै कुनामा भएपछि त्यसको आते–जाते प्लेन भाडा, सेभेन स्टार होटलको वसाई लगाएत सवै खर्च ब्यहोर्ने फुँई लगाएका उनले टेलिभिजन सेटमा आएर वहस गर्न पनि चुनौति दिएका छन् ।
तर, तिनै रवी लामिछाने जो अरुको जुठो खाएको छैन भन्दै फुर्ती लगाउँछन। उनै लामिछानेले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम ‘सिधा कुरा विथ रवी लामिछाने’ चाहीँ गैरकानुनी पैसावाट सञ्चालन भएको पाईएको छ ।
‘सिधा कुरा विथ रवी लामिछाने’ को प्रायोजक हो– रेड ब्लु इनर्जी ड्रिंक। उक्त इनर्जी ड्रिंक लोकप्रीय पेय पदार्थ ‘रेडबुल’को ट्रेड मार्क चोरी गरी उत्पादन तथा विक्री वितरण गरेको भन्दै अष्ट्रियाको प्रतिष्ठित कम्पनिले उद्योग विभागमा उजुरी गरेको छ।
रेडबुलको आधिकारीक उत्पादक रेडबुल एजी स्वीजरल्याण्डले भियतनाममा रहेको माइ वेभरेज एण्ड फूड प्रोसेसिङ स्टक कम्पनि विरुद्ध पेण्टेट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अनुसार कारबाही माग गर्दै विभागमा उजुरी गरेको हो । भियतनामस्थित उक्त कम्पनिले नेपालमा अवैध रुपमा रेडब्लु विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
नेपालकै एक कम्पनि मार्फत भियतनामवाट ल्याइएको रेड ब्लुलाई यसअघि समेत उद्योग विभागले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । तत्कालिन विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले रेड बुलको ट्रेडमार्क चोरी गरेको अभियोगमा रेड ब्लुलाई कारबाही गरेका थिए । भियतनामकै अर्को कम्पनि मार्फत नेपाल भित्र्याईएको रेड ब्लुलाई सरकारले २०७६ जेठमै नेपालभर विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
तर, उक्त रेड ब्लु नेपालमा अवैध रुपमा विक्री वितरण र प्रचार प्रसार भइरहेको छ । ०७६ जेठ २४ गते उच्च अदालत पाटनले उद्योग विभागको निर्णय सदर गर्दै रेड ब्लुलाई रेडबुलको जस्तो चित्र प्रयोग गरेर इनर्जी ड्रिंक भित्र्याउन नपाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशकै आधारमा विभागले नेपालमा आयात तथा विक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो ।
रवी लामिछाने ग्यालेक्सी फोरके सिधा कुरा